Uma usesimweni esingalindelekile futhi kunemibuzo emthethweni, sizodala imibuzo ezithakazelisayo kakhulu mayelana nezilwane nezimpendulo kubo.
Izinyathelo zomthetho on track ithini.
Ingabe i-veterinarian ilungile?
Ngithole inja egulayo. Ngaya emtholampilo wezilwane, kunqunywa ukwelashwa, kodwa inja yayilokhu ihamba kakhulu, futhi emva kwezinsuku ezingu-7 isilwane sami siphelile. Ngaqala ukungabaza ukufaneleka kwesifo nokuxilongwa. Ngicela ungitshele ukuthi ungiphenduphi ukuze uqinisekise noma ukhulule ukungabaza kwami. Zikhona yini iziphathimandla ezilawula umsebenzi wemitholampilo yezilwane?
Ngokuhambisana no-Art. I-180 ye-Civil Code yase-Ukraine (CGU), izilwane ziyizinto ezikhethekile zamalungelo omphakathi futhi zibhekwa njengezindawo, ngaphandle kokunye okuchazwe emthethweni. Ngakho-ke, lapho isilwane sibulawa, umuntu obhekene nalokhu ubophezelekile ukukhokhela umonakalo owenziwe kumnikazi. Kunoma yikuphi ukuphathwa kwezokwelapha ngesilwane sakho, udinga ukuthola ulwazi mayelana nezinqubo ezenziwe ngesignesha kanye nesitembu semtholampilo wezilwane. Uma, lapho kwenzeka ukufa kwenja yakho, ungabaza ngokufaneleka kwesifo nokuthola ukwelashwa okushiwo, kubalulekile ukwenza i-autopsy, ukudweba iphrothololi futhi uthole isizathu sokufa.
Ngokubhaliswa kahle kwamadokhumenti, umtholampilo lapho ukwelashwa okwenziwe khona uzophoqeleka ukubuyisela izindleko zenja. Uma umtholampilo ungakukhokheli ngokuzithandela inani elidingekayo, unelungelo lokufaka isikhalazo kumnakekeli wezilwane ongatholakali kahle futhi waphatha isilwane, kuqala ekuphathweni komtholampilo, futhi lapho kungekho khona impendulo kwihhovisi lezilwane zasendaweni. Uma, nangemva kwalokho, ungabuyiselwa ukulimala, faka isimangalo enkantolo. Kodwa-ke, ungaya enkantolo, udlulise izimo zangaphambilini.
Puppy egumbini lomphakathi
Imibuzo enentshisekelo mayelana nezilwane nezimpendulo kubo abanentshisekelo nabangokwengqondo.
Ngiphila endlini yokuhlala. Abomakhelwane bami bathenga i-puppy bengayibekeli ekamelweni labo, okungaba kuhle, kodwa ekhishini elivamile. Ngicela ungitshele ukuthi omakhelwane banelungelo ngaphandle kwemvume yami yokuqala inja endlini yokuhlala, ngisho nokuyibeka endaweni engafanele?
Zonke izinhlinzeko zokugcina izilwane ekhaya zivezwe "eMithethweni yokusetshenziswa kwezindlu zokuhlala" ezivunywe yiKhabhinethi yabaNgqongqoshe we-Ukraine Isimemezelo No. 45 kaJanuwari 24, 2006. Ngokusho kwakhe, uma umnikazi wenja ehlala efulethini lomphakathi, kumele athole imvume kubo bonke abaqashi ngokuphila kwenja. Ngaphezu kwalokho, umnikazi akufanele avumele isilwane sakhe ukuba siphume ngaphandle kwesizathu (ikakhulukazi emahoreni asekuqaleni nasekupheleni) noma ngokuphazamisa abanye omakhelwane.
Esimweni sakho, ngizokweluleka kokuqala ukuchazela omakhelwane ukuthi inja ayikho ekhishini elivamile. Futhi uma umnikazi we-puppy enqaba ukuthatha noma yiziphi izinyathelo - ukukhononda kwi-ejensi yokuphoqelela umthetho endaweni yokuhlala noma enkantolo ukuvikela amalungelo kanye nezithakazelo. Futhi, unelungelo lokufaka isimangalo ngesidingo sokuxosha inja efulethini.
Kungakhathaliseki ukuthi ubuyisele ukuthola bukhoma?
Kuhle ntambama! Ngithole inja egcwele emgwaqweni. Ingabe kufanele ngibike okutholakele kwami? Uma kunjalo, kuphi? Nginelungelo lokushiya inja ekhaya?
Ngokusho kwe-Civil Code yase-Ukraine (Isigaba 340), uma uthola inja, kufanele usheshe umtshele umnikazi bese ubuyela isilwane kuye. Uma ungeke ukwazi ukuthola umnikazi, udinga ukubika lokho okuthola kumapholisa noma uhulumeni wasekhaya ezinsukwini ezintathu. Ngenkathi usesha umnikazi, ungagcina inja oyitholile, uyinike umuntu ongayigcina ngokuvumelana nemithetho yezilwane, noma ayinikeze emaphoyiseni noma kuhulumeni wasekhaya. Uma kungakapheli izinyanga ezimbili umnikazi wenja akafuni ukubiza ilungelo lakhe, isilwane sizodlulela endaweni yakho. Uma umnikazi atholakele futhi inja idluliselwa kuye, unelungelo lokubuyisela izindleko ezihlobene nokugcina isilwane, ukunciphisa izinzuzo ezitholakala ekuziseni.
Udinga ukwazi ukuthi uma ushiya inja etholakale ekhaya, nguwe obhekene nomnikazi wayo uma kwenzeka efa noma "ehlaselwa", kodwa kuphela ngaphakathi kwezindleko zesilwane futhi kuphela uma kwenzeka ukuthi le nhlekelele ivele ngenhloso noma ngenxa yokunganaki kwakho okukhulu .
Umnikazi kufanele ajeziswe ngumthetho
Ngangilwa yinja yomakhelwane, futhi nginokwelashwa eside futhi okubi kakhulu. Ngingathanda ukwazi ukuthi ungaphi kimi nokuthi yini okudingekayo ukuqoqa amadokhumenti omnikazi ukuba ajeziswe ngumthetho futhi angikhokhele ekwelapheni.
Uma ulunywa inja, okokuqala udinga ukufakazela iqiniso lokuluma nokuthola ofakazi abazoqinisekisa ukuthi walunywa yinja. Unganqikazi ukuxhumana nabadlula-ngabona ukuthi kwenzekani, thatha izinombolo zabo zefoni - khona-ke bazokwazi ukuqinisekisa enkantolo iqiniso lokuluma. Khona-ke kudingeka udalule futhi uthumele isimangalo ngesaziso sokudiliva kanye nohlu lwezinamathiselo kumnikazi wenja. Esimangalisweni ubonisa ukubaluleka komonakalo, kubandakanya ukulimala kokuziphatha. Uma kungenjalo umnikazi wenzalo noma ukwenqaba ukuzithandela ukukhokhela umonakalo, xhumana nenkantolo.
Futhi qiniseka ukugcina zonke izinkomba, zokupheka, ukuhlola ukuthenga kwemithi, ukukhishwa kwamakhadi esibhedlela - konke lokhu kuyoba ubufakazi enkantolo.
Khulisa i-Hungarian kuvas
Ukuthanda ngokomzwelo izilwane ezifuywayo
Ukunakekela izinja zohlobo lwe-American Cocker Spaniel
I-eyebrow ukulungisa e-salon beauty
I-broccoli ku-boiler kabili
Ubuthakathaka bemisipha ye-pelvic
Indlela yokwenza indoda igqoke kahle?
Kungani sizama ukulawula abantu?
Indlela yokunquma kwangaphandle ubukhulu bomuntu
Ama-eggplants othosiwe anemi-oliva nama-capers
Ukuvivinya kwasekuseni - isibambiso sokuhle
Indlela yokuziphatha kahle nge-bitch?
Ukukhethwa kwemikhiqizo yohambo lokuhamba
Ukuvumelanisa nge-Genetic of Spouses